Malunga nathi - Xuzhou Shengsida Construction Machinery Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2005, Xuzhou sheng si da Machinery Co., LTD, ligxile kwishishini lwezincedisi rhoqo ofconstruction oomatshini kunye nomatshini epheleleyo.
Umanduleli wenkampani yenye yokusasaza iXCMG, Zoomlion, Sany Heavy Industry Co, LTD kunye neGuangxi Liugong Machinery Co., LTD, eyasekwa ngonyaka ka-2000, eyayisebenza kwimarike yasekhaya ixesha elide kwaye yaphumelela Kwaye kwathenjwa ngokubanzi ngabathengi. Nophuhliso olukhawulezileyo lwehlabathi, inkampani yethu iye yasekwa ukwandisa imarike yamazwe ngamazwe.
Ifunyanwa kwidolophu ebalulekileyo yezothutho e China -Xuzhou, ekwabizwa ngokuba yi "OrientalAthens" kunye "nesixeko soomatshini bokwakha e China", sikonwabela ukufikelela okufanelekileyo kuthungelwano olukhulu lwezothutho, intabalala yokuvelisa kunye namava okuthengisa kunye ne ephezulu- izixhobo zemveliso esemgangathweni. Ezona ntengiso zethu zibandakanya iRussia, iAfrika, uMbindi Mpuma, uMzantsi mpuma Asia kunye namanye amazwe.
Ulawulo lomgangatho olungqongqo lugubungela yonke inkqubo, ukusuka ekufumaneni izinto kunye nokulungiswa ukuya kuvavanyo kunye nokupakisha, ukuzama ukufezekisa umgangatho ekujoliswe kuwo "kumgangatho ophezulu kunye nokusilela okupheleleyo".
Ngokusekwe kwiimveliso ezisemgangathweni, inkonzo ebalaseleyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nokuhanjiswa kwangexesha, sijonge phambili ekusebenzisaneni okuhle namaqabane ekhaya nakumazwe aphesheya kunye nokudala ikamva eliqaqambileyo.
Nceda unxibelelane nathi malunga nezahlulo zokuqala. Ukongeza, sikwangumboneleli wezinto ezingasasebenziyo kunye neenkonzo kwiimveliso ezininzi, ezingene kumgca wemveliso ngokuthengwa kweqhinga.
Crane abaza kuzisebenzisa brand ezininzi
Sazi kakuhle iikhreyithi zeemveliso ezininzi, hayi i-XCMG brand kuphela. Ngokubanzi, XCMG unako ukuthenga crane abaza kuzisebenzisa abenzi izixhobo yokuqala.
Sinako ukuvelisa abaza kuzisebenzisa ukuhlangabezana neenkcukacha zakho. Izinto ezizilungiselele ngokwazo zibandakanya amagwegwe, iireels, iigears kunye neebheringi. Iimpahla ziyafumaneka kwintengiso kwiindawo ezikhethiweyo, nceda unxibelelane nathi ngeenkcukacha.
Unonophelo lomjikelo wobomi
Indlela yethu yolondolozo lwe-crane isekwe kukhathalelo lobomi, eyindlela yolondolozo ebanzi necwangcisiweyo exhaswa zizixhobo eziphambili zehlabathi kunye neenkqubo. Ukhathalelo lomjikelo wobomi lufezekisa ixabiso eliphezulu lomjikelo wobomi ngokuphucula imveliso yexesha lokugqibela kunye nokunciphisa iindleko zexesha lokuphumla.
Inkonzo yexesha langempela
Sisebenzisa i-Intanethi yeShishini ukujonga kude, ukufumanisa isifo, ukuhlalutya, kunye nokuqikelela iinkonzo zokugcina ngokusekwe kukusetyenziswa. Nika abathengi ulwazi olucacileyo nolwabelwanayo, ngamava okwenyani abonakalayo awodwa kubathengi.
Inkcubeko yezokhuseleko kunye nerekhodi
KwiiKonecranes, akukho nto ibaluleke ngakumbi kwaye ibaluleke ngaphezu kokuqinisekisa ukuba umsebenzi wethu wenziwa ngokukhuselekileyo nangokuchanekileyo.
Iinkonzo zethu zokubonisana zinceda ukuqonda iinkqubo zakho kunye nokusebenza ngokunzulu.
Ukuzibophelela kweenkonzo ngokubanzi
I-Konecranes ibonelela ngeseti epheleleyo yeenkqubo zeenkonzo kunye neemveliso ezenzelwe wena ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Umgama weZero Umgama
Sinenkonzo yothungelwano lwehlabathi, kwaye sineendawo zeenkonzo ezingama-600 kumazwe angama-50.
Njengenkampani ebalaseleyo, sitsalile inani elikhulu leetalente ezibalaseleyo. Banokuhlala ngenxa yokuzibophelela kwethu ekuphumezeni ukukhula kunye nophuhliso.
Sineenkqubo zoqeqesho kubuchwephesha kunye nezatifikethi ezijolise ekuphuculeni ukhuseleko kunye nemveliso. Inkonzo yethu ixhaswa ngothungelwano oluhambele phambili kwezobuchwepheshe.
Singumvelisi wezixhobo eziphambili ezineminyaka engaphezu kwe-100 yamava kunye nezixhobo ezingama-600,000 ezifakwe kwizivumelwano zokugcina. Amava eKonecranes ahambelana ne-sub-brand efunyenweyo kunye nesiseko sabathengi. Sinamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kuzo zonke iimveliso ezingaphantsi.
Njengenkampani ebalaseleyo eqhubeka ngokujonga kumacandelo e-R & D kunye netekhnoloji ye-smart, ukusebenza kwethu ekunikezeleni nasekuxhaseni iimveliso kunye neenkonzo ezintsha zamkelwe kakuhle.
Sijonge ukusebenzela wena. Iimveliso zethu eziphambili zezi zilandelayo. Kwaye ukuba ufuna olunye ulwazi olungakhankanywanga apho, nceda ukhululeke usazise.